रुदी ए जलविद्युतबाट परिक्षण उत्पादन शुरु - Kantipath.com
रुदी ए जलविद्युतबाट परिक्षण उत्पादन शुरु
काठमाडौं– पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य आशातित रूपमा सम्पन्न हुन पुगेका छन् ।
सरकारी स्वामित्व एवं लगानीका आयोजनाको निर्माण कार्यमा आशातित प्रगति नभइरहेको बेला निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न थालेका हुन् ।
केही पहिले मात्र लमजुङमा आयोजनास्थल रहेको २५ मेगावाट क्षमताको दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै दोलखामा आयोजनास्थल रहेको २५ मेगावाट क्षमताको सिङ्गटी जलविद्युत् आयोजनाको पनि सुरुङ निर्माण सम्पन्न भयो ।
यसै क्रममा लमजुङ र कास्कीको सिमानामा पर्ने रुदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सकिएको छ । स्थानीय रुदी खोलामा निर्माण गरिएको ८ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनाले १५ दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई परीक्षणको समय निःशुल्क विद्युत् दिएको छ भने एक महीनाभित्र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको छ । असोज २० गतेदेखि नहरमा पानी राखेर परीक्षण थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (सीओडी) गत वर्षको असारमा नै तोकिएको थियो । तर निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएपछि आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन मिति पर सारेको हो ।
रुदी ‘ए’ जलविद्युतको २०६९ माघ २८ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको थियो । निर्माण शुरु भएको दुई वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । हिउँदको समय आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । आयोजना एक अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । २०७४ असार मसान्तभित्र सक्ने भनिए पनि ०७३ को असारमा बाढीपहिरोले निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुर्‍याएपछि निर्माण अवधि लम्बिएको थियो । त्यसअघि भूकम्प र नाकाबन्दी साथै पहिरोले आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बनेका आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोज भट्टराईले बताउनुभयो ।
विद्युतगृहमा ४ दशमलब ४ मेगावाटका दुई पेलटन टर्बाइन जडान गरिएको छ । अहिले इन्टेक र पेनस्टकमा पानी राखेर परीक्षण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । लमजुङको क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ५ सिङदीगाउँ र कास्कीको मादी गाउँपालिका–८ सिङदीबेसीमा आयोजनाको बाँध निर्माण गरिएको छ । आयोजनामा ६ किलोमिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत पानी हालिएको छ । मादी–९ बालुवाबोसीमा निर्माण गरिएको विद्युत् परीक्षण उत्पादन शुरु गरिएको छ । आयोजनाको सिभिलतर्फ हाइ हिमालय हाइड्रो कन्सट्रक्सन, हाइड्रो मेकानिकलतर्फ नर्थ हाइड्रो एण्ड इञ्जिनीयरिङ र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ तोशिबा प्लान्ट सिस्टम एण्ड सर्भिस कर्पोरेशनले काम गरेको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धकमा विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रालि रहेको छ । आयोजनामा प्रवद्र्धकको ३० प्रतिशत स्वपूँजी रहेको छ भने सानिमा बैंकलगायतले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले ६ दशमलव ६ मेगावाटको रुदी ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको पनि पावरहाउसको सिभिलतर्फको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
Previous Previous post: बलात्कार विरुद्ध कौशिला रिसालको सिर्जना
Next Next post: हाम्रो सिट गुम्ने गरी उपनिर्वाचन हुँदैन : प्रचण्ड
आजदेखि बढ्यो बैंकहरूको ब्याजदरः कुन बैंकको कति ?
अर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने बैंकको संख्या थपियो
एनबीको हकप्रद शेयर बिक्रीमा अनियमितता भएको रहस्य खुल्यो
सेन्चुरीको हकप्रद भर्ने म्याद एक दिन थप
नागरिक लघुवित्तको काभ्रेमा केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन !
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले आजदेखि शतप्रतिशत हकप्रद बिक्रि खुला
सनराइज बैंक र महिला चेम्बरबीच व्यापार साझेदारी सम्झौता